सुनसरीकी अमृता सुवेदी (नाम परिवर्तन) भारतको गोवामा रोजगारी गर्दै आएकी थिइन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न भारतले लकडाउन घाेषणा गरेसँगै उनी भारतको गोवामा २ हप्तासम्म अलपत्र परिन् । ४ वर्षदेखि गोवाको एउटा चाउचाउ फ्याक्ट्रीमा एकाउन्टेन्ट काम गर्दै आएको अमृताले बताइन् । गत मार्चमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न भारतले लकडाउन गरेसँगै कम्पनी बन्द भएपछि गोवामा १५ दिन अलपत्र परेर बसेको अमृता बताउँछिन् ।
‘गोवाबाट असम नजिक पर्छ । तर, असम मणिपुरको बाटो भारतीय प्रहरीले नेपाली मूलको मान्छे हिँड्न नदिएपछि वनारस हुँदै नेपाल आउनुपर्‍यो । कोरोनाका कारण भारतबाट नेपाल आउँदा ४० दिन बाटोमा ठूलो समस्या झेल्नुपर्‍यो । यस अवधिमा मेरो जीवनमा के चाहिँ भएन’, उनले भनिन्, ‘छोरी मान्छे जता गए पनि असुरक्षित हुन्छन् । कोरोना भाइरसका कारण भारतदेखि ४० दिन लगाएर नेपाल आउँदा बाटोमा भोगेको पीडा कसलाई सुनाउनु ? भन्यो भने इज्जत जान्छ ।’ कोरोनामा समस्या परेका नभनी सबैले बाटोपिच्छे फाइदा लिएको उनको गुनासो छ ।
‘प्रहरीको शर्त सुनेपछि ४ जना एकछिन अलमलमा परेर हेराहेर मात्र गर्‍यौँ । बीचमा १ जना साथीले हिन्दीमा हुन्छ भनेपछि प्रहरीले भ्यानमा हालेर सिलगुडीतिर लगे । त्यसपछि २ रात भनेर ५ रात राखेर झापाको काँकडभिट्टापारि पानी ट्यांकी नजिकै पेट्रोल पम्पमा लगेर छाडेर फर्किए’, उनले भनिन्, ‘कोेरोनाका कारण अलपत्र परेर फर्किंदै गरेका होलान् नभनी फाइदा मात्र लिए । अब के भयो भनेेर कसरी घरमा भन्नू ? एकातिर कोरोनाको चिन्ता, अर्कोतिर प्रहरीसँग रात बिताउँदा नतिजा के होला भन्ने चिन्ताले ज्यान लिने भयो ।’ अमृतासँग अन्य ३ जना युवती सँगै आएका थिए । कोरोना भाइरसका कारण बाटोमा अलपत्र परेका थिए । उनीहरू वनारसमा क्वारेन्टाइनमा बस्दा भेट भएर सँगै नेपाल आएका थिए ।
‘कोरोना परीक्षणका लागि तापक्रम नाप्ने भन्दै ज्वरो नाप्न बसेका भारतीय प्रहरीले संवेदनशील अंग छुन्थे’, उनले भनिन्, ‘भारतमा बाध्यताले मात्र काम गरेर बसेकी हुँ । कतिपय साहुले नेपाली युवतीलाई इज्जत गर्दैनन् । उनीहरूले नेपाली युवतीलाई कार्यस्थलमै जे मन लाग्यो, त्यही गर्छन् । अर्काको ठाउँ भनेर धेरै नेपाली युवती सहेर काम गरिरहेका छन् ।’ सुवेदीसँग ५ जना महिला अहिले झापामा क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् ।
(सामाजिक सञ्जालमार्फत् भारत हेल्थ मिसन नेपालका एक सदस्यको सहयोगमा यो सामग्री तयार पारिएको हो ।शिलापत्रबाट साभार)